Politika fanorona: Resin-d Ravalomanana Marc aloha izao i Andry Rajoelina | Hevitra MPANOHARIANA
aminao raha resy zany zao i Andry dia ahoana ny hevitrao sy ny pronostikanao @ zay manaraka eo?
Nampidirin'i Papoose @ 01:23, 2009-01-22 [Valio]
Novakiana tao amin'ny vaovaon'ny TV Plus omaly ny fanambarana ofisialy nataon'ny PDG an'ilay société koreana, tsy tadidiko tsara ny anarany fa mitovitovy amin'ny hoe "Madagascar Future Entreprise Daewoo" (mila hamarinina) fa tsy mitombona velively ny filazana fa efa azon-dry zareo ny tany nangatahiny tamin'ny fanjakana Malagasy. Kanefa ry TGV sy ny mpanara-dia azy dia nanitrikitrika mihitsy fa efa lasan'ny koreana ny tany, izay moa no antony nangatahan-dry zareo ny fialan'ny minisitry ny fanajariana ny tany. Sa mety nandainga ve ilay PDG ? Hita eo ny tohiny.
Nampidirin'i CitizenGasy @ 07:27, 2009-01-22 [Valio]
Potika hatrany ny demaokrasia! noho ny fifandiran'izy mianaka no antony. Mbola hanoratra momba io aho fa hiomana ho amin'izany aloha. Izay no tena nampalahelo aho
Nampidirin'i jentilisa @ 07:36, 2009-01-22 [Valio]
NAnaitra ahy ilay sary faharoa (raha Ratsirahonana io), dia ho lasa fitaovana ve ?
E e e, tena fifandiran'olon-droa ny tantara e, izay ilay polotika e, ry zareo mihinan-kanina tsara eo ambony latabatra na miady toy ny alika ary fa raha izao no raikitra ny rotaka dia isika vahoaka no hijinja ny voka-dratsy.
Nampidirin'i Nirina @ 13:17, 2009-01-22 [Valio]
Tsy Ratsirahonana io ka!
Nampidirin'i jentilisa @ 13:23, 2009-01-22 [Valio]
Andry no manao ny marina ary izy no inoako fa handresy satia momba azy ny Andriamanitra tokana nahary ny tany sy ny lanitra.
Nampidirin'i deretol @ 16:16, 2009-01-22 [Valio]
manao kilalao maloto ve raha tsy maintsy tonga any an-daklasy ny mampianatra amin'ny sabotsy, ary amin'ny 2 hariva vao mirava...hamarino anie ... maso be tsy mahita ny fanorona koa ve izany?...
Nampidirin'i ndrema @ 18:25, 2009-01-22 [Valio]
ny mpampianatra fa tsy ny mampianatra o...tsy miakatra amin'sabotsy sao mankeny ambohijatovo...mba marina koa ve izany?
Nampidirin'i ndrema @ 18:28, 2009-01-22 [Valio]
ho an'i deretol
deretol > mba sokafy ange saina e! Tsy misy olona marina izany eto ambonin'ny tany fa samy efa nanota daholo : na ravalo io na i andry, na izaho na ianao.
"Manana ny rariny" @ toe-javatra iray angaha hoe dia misy ihany.
Manaraka izany : ny hafatrao dia toy ny manambara fa izay rehetra tsy miandany @'i andry 'zany dia "minia manaraka devoly", na koa manohana "olon-dratsy" daholo. Mba sokafy ange ny fijery e! Samy malagasy isika, na izaho, na ny hafa na ianao, samy tia tanindrazana koa fa tsy misy maniry ady an-trano, na koa ny hitohizan'ny fahantrana eto Madagasikara. Na izany aza dia samy manana ny fijeriny fotsiny : ianao manome rariny an'i andry, izaho kosa toa mahita hoe ravalo no manana ny rariny "kokoa". "kokoa" hoy aho satria efa samy nanao fahadisoana sy efa samy nandainga ry zareo ireo.
Koa aza "fanatique" be toy izao.
Toy ny miteny ianao hoe : israelianina no marina, na koa ny palestinina. Samy tsisy marina ireo : fa samy diso na dia samy mahita izay rariny ho azy avy aza.
Raha mivavaka tokoa ianao dia manaova hoe : "izay mahasoa anie hataon'Andriamanitra" fa aza manery an'Andriamanitra hanaiky ny safidinao izay mety ho diso.
Fahendrena malagasy io fomba fiteny io, fa misy teny mitovy amin'io ao @ baiboly (raha kristianina ianao), sy korano masina (raha silamo ianao)
Nampidirin'i Korio @ 19:47, 2009-01-22 [Valio]
ahiko hisy harary fo be ny hiafaran'lisany ireto ra izao no mitohy kle
tsy te ahita ah :P
Nampidirin'i simp @ 19:55, 2009-01-22 [Valio]
Ny ahy fanamarihana mba tiako hatao dia mikasika ilay lazain'ny mpahay tantara hoe "cycle". Ohatran'ny mety tapitra izany foana ny antsika gasy fa misy mitady anakorontana.
Io Ra-Jentilisa mba anaovy lahatsoratra ho anao mpandinika.
Dia manofy aho izany hoe rehefa tonga ny investiture n'izay ho avy eo amin'ny 2012 dia mba manatrika koa ingahy Ravalo (ohatra an'i Bush e); dia alefa helicoptère avy eo hiala sasatra.
Hatramin'izay nisy fifandimbiasana teto mantsy dia gidraka foana fa tsy mba nisy hoe mi-tsodrano anao filoha vaovao hahaleo hahalasana.
Nampidirin'i pkm @ 08:39, 2009-01-23 [Valio]
maro dia maro izany asa miandry ahy izany nefa anie aho ampangaina ho voakarama hiaro ny fitondrana e!
Misaotra aloha ny amin'izay fa ho avy aho amin'ny fotoana mety
Nampidirin'i jentilisa @ 09:36, 2009-01-23 [Valio]
Notorian'ny Daewoo hono i Rolland Ratsiraka
Vaovao navoakan'ny Le Quotidien androany : nametraka fitoriana any Paris ny Daewoo International, fitoriana mihatra amin'i Rolland Ratsiraka pour diffamation et outrage satria nolazain'i Rolland Ratsiraka ampahibemaso omaly tany Antsiranana fa Daewoo hono no nanome ny antsasaky ny vola hividianana ny fiaramanidina Force One. Asa iza indray no mandainga amin'ity raharaha ity fa tsy hay intsony... Raha misy manana fanampim-baovao ianareo dia mba zarao aminay e.
Nampidirin'i CitizenGasy @ 15:49, 2009-01-23 [Valio]